प्रेस्क्रिप्सनभन्दा विपरीत समूहको रगत दिने अस्पतालको लापरबाहीले बिरामीको दुवै मिर्गौला फेल – Puleso
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ प्रेस्क्रिप्सनभन्दा विपरीत समूहको रगत दिने अस्पतालको लापरबाहीले बिरामीको दुवै मिर्गौला फेल
प्रेस्क्रिप्सनभन्दा विपरीत समूहको रगत दिने अस्पतालको लापरबाहीले बिरामीको दुवै मिर्गौला फेल
पुलेसो १० माघ, २०७७, शनिबार ७:२८
भेरी अञ्चल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहीले बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका–३ सोरहवाकी २२ वर्षीया रुमा थारूको दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेको छ ।
महिनावारी हुँदा अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि परिवारले रुमालाई गत २१ पुसमा अस्पताल भर्ना गरेको थियो । ‘ओ’ पोजेटिभ रगत समूह भएकी उनलाई अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले ‘बी’ पोजेटिभ चढाएका थिए । जसले उनको दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेको छ ।चढाइएपछि जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेकी छिन् ।
शुक्रबारदेखि उनको स्वास्थ्य अवस्था झनै नाजुक बनेको छ । मुख सुनिएको छ, सहन नसक्ने गरी पेट दुख्न थालेको डा।.आचार्यले बताए । उनलाई दुखाइ कम गर्ने कडा खालको औषधि दिइएको उनले बताए । ‘बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको प्रकृति हेर्दा दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ,’ डा. आचार्यले भने ।
भेरी अञ्चल अस्पतालमा उपचार सम्भव नहुने भन्दै चिकित्सकले काठमाडौं रिफर गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘केही आशा अझै बाँकी रहेकाले डाइग्नोसिस भइरहेको छ,’ डा. आचार्यले भने, ‘भेरी अस्पतालका डाक्टर सा’बहरूले रिफर गरिसक्नुभएको छ, तैपनि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर थप डाइग्नोसिस गरेर हेर्दै छौँ ।’ उनलाई काठमाडौंस्थित वीर अस्पताल रिफर गर्ने तयारी भइरहेको अस्पतालको भनाइ छ ।
दुई सातासम्म गोप्य राखियो घटना
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण आचार्यले बिरामीलाई ठीक गर्न सकिन्छ कि भनेर दुई हप्तासम्म घटना गोप्य राखेको बताए । घटना लुकाउन नसकिने अवस्था आइसकेको उनले बताए । गाइनोलोजी विभागबाट आइसियूमा छोरीलाई ल्याएको भनिए पनि के कारणले ल्याएको हो जानकारी नदिएको रुमाका बाबु राजुले बताए । आफूलाई छोरीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी नभएको उनले बताए । ‘छोरीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे अस्पताल प्रशासनले कुनै जानकारी नदिएर गोप्य राखेको छ,’ उनले भने ।
अस्पतालद्वारा लापरबाही भएको स्वीकार
कर्मचारीको लापरबाहीले रुमाको स्वास्थ्य बिग्रिएको भेरी अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण आचार्यले स्विकारे । चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनभन्दा विपरीत समूहको रगत दिने र रगतको ब्यागमा उल्लेख गरिएको समूह नहेरेर रगत चढाउने स्टाफ नर्स दुवैको गल्ती भएको उनले बताए । ‘ब्लड बैंकका कर्मचारी र स्टाफ नर्स दुवैको गल्ती देखिन्छ,’ उनले भने । नँया पत्रिका